SARIPIKA: Toeram-pahatsiarovana 5 Ao Santiago, Chile · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2013 12:51 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Português, বাংলা, Italiano, українська, English
Foibe fanagadrana sy fampijaliana taloha Londres 38, tamin'ny 11 Septambra 2013. Sary avy amin'ilay mpisera Hi Sashi tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
Tao amin'ny bilaogy Memory in Latin America (Fahatsiarovana ao Amerika Latina), namoaka andiàn-dahatsoratra momba ireo “toeram-pahatsiarovana” ao Santiago, renivohitr'i Shily i Lillie Langtry. Ireo toerana ireo dia Fanorenana lehibe na toerana misy ifandraisany tamin'ny fanonganam-panjakana miaramila izay naha-voahongana ny filoha sosialista Salvador Allende tamin'ny 11 septambra 1973, sy ny didy jadona 17 taona notarihan'i Augusto Pinochet. Manamarika ny faha-40 taonan'ny fanonganam-panjakana miaramila ity taona ity.
1. Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona
Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona. Sary avy amin'i Giovanni A. Pérez tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC 2.0)
Manomboka amin'ny Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona [espaniola] ity fitsidihana virtoaly ity, “toerana midadasika sy manintona”, araka ny fanazavan'i Lillie:
Indrisy, tsy mahazo maka sary ao anatiny ianao, izay tena henatra tokoa, satria ny tena manintona ahy indrindra dia ny rindrin-tsary goavambe misy ny sarin'ireo nanjavona mahahenika ny tahala iray manontolo. Misy ihany koa toerana izay hahafahanao mitsangana sy mijery izany ary mahita ny anarana sy ny tavan'ireo olona.
Ao ambany rihana no ahitana kiefitrefitra mampiseho lahatsary tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1973 sy ny vokatra naterany. Ary raha miakatra any amin'ny ambony rihana ianao, dia maro ny faritra mampiseho endri-javatra samihafa tahaka ny fanaovana sesintany sy ny firaisankina iraisampirenena, fitantarana amin'ny fampahalalam-baovao, ary ny fampijaliana – ahitana, zava-mampangovitra, fitaovana fandoroana amin'ny herinaratra (namboarin'ny General Electric – izay tsy nilaza fa natao ho ampiasaina amin'izany ny fitaovana!). Ahitana zavatra namboarin'ireo gadra sy ny sarin'ireo toeram-pahatsiarovana manerana an'i Shily ihany koa ao.
Fanambarana manerantany momba ny Zon'olombelona tao amin'ny Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona tao Shily. Sary avy amin'i Jen Dyer tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-ND 2.0)
Nanamarika ihany koa i Lillie fa “miharihary ny tsy mahatoerana ahafahanao mijoro maha-tsy miandany anao ao na ampifandanjanao ny mpanohana sy ny mpanohitra an'i Pinochet amin'ny fomba mitovy”, ary nanantsonga ny voasoratra amin'ny taratasy fampafantarana ny mozea ihany koa izy:
Tokony hotarihan'ny fananana maoraly ny asam-pananganana toeram-pahatsiarovana; tsy maintsy manangana ny famakiana ny ratram-panahy iombonana izay mihoatra noho izay miharihary, tantaran'ireo lasibatra sy ireo mpamono olona, ireo meloka sy ireo tsy manan-tsiny, isika. Ny tanjona amin'ny fananganana ny mozean'ny fahatsiarovana dia ny hanaovana azy ireny ho lasa tahala manohana ny kolontsain'ny zon'olombelona sy ny hasina demokratika ka hahatonga azy ireny ho fototra mamaritra ny ankehitriny sy ny fiaraha-miaina rahampitso. Amin'izay fomba tokana izay ihany no hahafahantsika manamafy ny hoe TSY MILA IZANY INTSONY.”
Azonao jerena ao amin'ny Flickr ireo sary maro hafa momba ny mozea (anisan'izany ireo sasany avy ao anatiny).
“40 Taona Nitolomana sy Nanoherana”: Londres 38, foibe famonjàna sy fampijaliana taloha tao Santiago, Shily. Sary avy amin'ny ben'ny tanànan'i Santiago tao amin'ny Flickr. Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
Tamin'ny lahatsoratra hafa, nanoratra momba ny foibe famonjàna sy fampijaliana taloha antsoina hoe Londres 38 i Lillie:
Nampiasain'ny DINA (polisin'ny fitsikilovana) ho foibem-pampijaliana sy fanagadrana ireo mpanohitra ny fitondrana, ka farafahakeliiny 98 tamin'izy ireo no namoy ny ainy tao na taoriana kely [es]. Eo anoloan'ny tranobe, miraikitra eo amin'ny rindrim-bato (mitovy amin'ny Stolpersteine ao Alemaina) ny anaran'ireo niharany.
Somary gaga aho tamin'ny voalohany, nahita ny toetry ny rindrina, saingy misy dikany kokoa izy tahaka izao toy izay feno fanaamboamboarana. Hahatsapa kokoa ny fangirifiriana nisy teo amin'io toerana io ianao; na dia mahatalanjona tokoa aza ny mihevitra hoe tena mahazo ny afovoan-tanàna tokoa ilay toerana. Nanoratra i Ilovechile.cl fa fantatra tamin'ny mozika klasika mitabataba mafy avy ao anatiny ilay tranobe – mampatahotra ihany rehefa fantatra hoe inona no rakofan'izany mozika izany .
Londres 38 tamin'ny 11 Septambra 2013. Sary avy amin'i César Castillo tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
La Moneda, lapam-panjakana Shiliana. Sary avy amin'ilay mpisera Alobos Life tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
Namoaka lahatsoratra momba ny lapam-panjakana shiliana, izay voadaroka baomba nandritra ny fanonganam-panjakana tamin'ny 11 septambra 1973 ihany koa i Lillie.
Francisco Vergara nanoratra momba ny daroka baomba tao amin'ny Democracities :
ty tranobe ity, izay heverina ho sariohatry ny fahaleovantenam-pirenena sy tarazo repoblikana ity, tsangambaton'ny fandrosoana ara-tsosialy dia nodorana sy nopotehin'ny hery miaramilany izay nanao fianianana ho tokin'ny firenena sy ny lalàmpanorenany I. Saintsaino anie izany hoe F-16 roa midaroka baomba ny Trano Fotsy, na “Rivodoza” (Typhoons) roa midaroka ny Lapa Buckingham… Tranga sarotra inoana indrindra. Izany fanafihana izany no marika fiafaran'ny vanim-potoana repoblikana sy demaokratika .
Efa-polo taona taorian'ny fanonganam-panjakana. La Moneda. Sary avy amin'i Hi Sashi tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
4. Tsangambato fahatsiarovana hoan'ireo nanjavona
Tsangambato fahatsiarovana reo izay nogadraina, ireo izay nanjavona ary ireo izay notapahan-doha noho ny antony ara-politika. Sary avy amin'ilay mpisera Nuevasantiago tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY-NC-SA 2.0)
Tamin'ny lahatsoratra navoakany farany teo momba ireo toeram-pahatsiarovana ao Santiago, nilaza momba ny tsangambato fahatsiarovana ireo Nanjavona i Lillie: “rindrina goavambe vita amin'ny vato ahitana ny lisitr'ireo lasibatra no voasokitra ao anatin'izany”.
Nanazava izy fa ao anatin'ny tokotanim-pasana no misy ny tsangambato fahatsiarovana :
Nankafiziko foana ny mijery ny fomba nampiasàna ireny tsangambato fahatsiarovana ireny, izay ao anatin'ny vanim-potoana iainana . Amin'ity tranga ity, eo amin'ny fanambanin'ny tsangambato dia ahitana naoty, sary, takelaka madinika , voninkazo marobe sy sisa hafa . Toerana matromatroka izany, satria ao anatin'ny tokotanim-pasana. Ny zava-dehibe dia tsy mba nanana toerana isaonana ny fianakavian'ny lasibatra tamin'ny voalohany sy hanamarihany ny fiainany, ary ankehitriny manana izany ry zareo, ary mankasitraka ny lehiben'ny tokotanim-pasan'ny renivohitra lasa mametraka azy ho ao anatin'ny tantaran'ny firenena
Raúl Valdés Stoltze. Tsangambato fahatsiarovana ireo nanjavona. Sary avy amin'i Paul Lowry tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY 2.0)
Tsidiho ny bilaogin'i Lillie raha te-hamaky lahatsoratra bebe kokoa momba ny tsiaro sy ny zon'olombelona ao Amerika Latina. Azonao atao ihany koa ny manaraka azy ao amin'ny Twitter:@Lillie_Langtry.
5. Ny kianjam-pirenena
Kianjam-pirenena ao Shily. Sary tao amin'ny Wikimedia Commons, Creative Commons license (CC BY 2.0)
Farany, tianay ny manampy toeram-pahatsiarovana iray fanampiny ao Santiago: ny Kianjam-pirenena (Estadio Nacional amin'ny teny espaniola), nampiasaina ho foibem-pigadrana sy fampijaliana.
Araka ny fanazavan'i Pascale Bonnefoy tao amin'ny Global Post, “Ny tombatombana amin'ny fitambaran'ny isan'ireo gadra dia 7 000 hatramin'ny 20 000, ka 1 000 eo ho eo ny vehivavy. […] Ny toerana nanaovana fampijaliana dia teo amin'ny toeram-pihazakazahana am-bisikileta, tao amin'ny biraom-panjakana, teny amin'ny lalantsara ary teny amin'ny kianja. Tsy misy tarehimarika raikitra mikasika izay isan'ny olona novonoina na nanjavona tao amin'ity kianjabe ity.”
Mahatsiaro ireo gadra 40 taona lasa izay, tamin'ny 11 Septambra 2013 tao amin'ny Kianjam-pirenena. Sary avy amin'i Pablo Trincado tao amin'ny Flickr, Creative Commons license (CC BY 2.0)